Dermoplast - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dermoplast
Generic Name: Dermoplast Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dermoplast ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Dermoplast® (benzocaine topical)ကိုဆေးပညာတွင်မရေး
ဖြစ်ပွားရာနေရာကိုနေ့စဉ်လိမ်းပေးပါ။ ဗူးကို ဖြစ်ပွားရာနေရာမှ
မျက်နှာတွင်လိမ်းရန် လက်ဖဝါးတွင်အရည်အားဖြန်းပေးပြီးမှ လိမ်း
(သို့)မျက်နှာပေါ်တွင် ဆေးအားမဖြန်းပက်ပါနှင့်။ မရှူသွင်းပါနှင့်။
Dermoplast® (benzocaine topical ကိုအခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။Dermoplast® (benzocaine topical)ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေ
မဖြစ်အောင်လို့ Dermoplast® (benzocaine topical)ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Dermoplast® (benzocaine topical)ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။Dermoplast® (benzocaine topical)ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Dermoplast အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်မိပါက ယခုဆေးအပါအဝင် သင့်ဆရာဝန်
နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ထိုဆေးများတွင် ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲဝယ်ယူရရှိ
သင့်တွင် အခြားသောဆေးများ(သို့) Dermoplast® (benzocaine topical) ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ဓါတ်မတည့်မှုများရှိပါကလည်းသင့်ဆရာဝန်
သင့်တွင် အခြားသောရောဂါများရှိပါကလည်းDermoplast® (benzocaine topical)အသုံးမပြုခင် သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
သင့်တွင် methemoglobinemiaရောဂါ၏ လက္ခဏာများဥပမာ
သင့်တွင် methemoglobinemiaရောဂါသင့်တွင် ရှိဖူးပါကDermoplast® (benzocaine topical)ဆေးအားအသုံးမပြုပါနှင့်။
ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အကြံပြုချက်မပါပဲ ထုံ
ဆေးများကိုအသုံးပြုစဉ်တွင် ထိုသို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ဥပမာ- လေဆာဖြင့် ဆံပင်နှုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအလှပြင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်
အတွင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်မပါပဲ အလှပြင်သည့်ထိုကဲ့သို့သော
Methemoglobinemia ရောဂါရှိဖူးခြင်း(သို့)မွေးရာပါ အင်ဇိုင်းဟုခေါ်သည့် ဓါတ်ကူပစ္စည်းများချို့တဲ့သည့် ရောဂါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dermoplast ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် စီရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Dermoplast ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Dermoplast® (benzocaine topical)ကိုခံတွင်း(သို့)လည်ချောင်းထဲသို့ရောက်အောင်အသုံးပြုမိပါကရှား
သည့် methemoglobinemiaရောဂါကို ဖြစ်စေတတ်သည်။ ထိုသို့
နည်းပါးသွားတတ်ပြီးDermoplast® (benzocaine topical)တစ်ကြိမ်(သို့)အခါပေါင်းများစွာသုံးပြီးနောက်ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ ဖြစ်ပွားသောလက္ခဏာများသည် ခံတွင်း(သို့)လည်ချောင်းထဲရောက်အပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မှ 2နာရီအထိကြာမြင့်နိုင်သည်။ သင့်တွင်အောက်
ဆေးလိမ်းလိုက်သောနေရာတွင် အဖြူရောင် အကွက်ခြောက်များ
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Dermoplast နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dermoplast® (benzocaine topical)ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dermoplast နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Dermoplast® (benzocaine topical) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dermoplast နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dermoplast® (benzocaine topical)ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dermoplast ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်အသက်2နှစ်နှင့်2နှစ်အထက်ကြီးသူများတွင် ဖြစ်ပွားရာနေရာကိုတစ်နေ့လျှင် 3ကြိမ်မှ 4ကြိမ်အထိသာ
ကလေးတွေအတွက် Dermoplast ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်2နှစ်အောက်ငယ်သောကလေးများတွင်အသုံးပြုရမည့်ပမာဏကိုသင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Dermoplast® (benzocaine topical)ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ် အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ် ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Dermoplast® (benzocaine topical)ကိုသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 27, 2019
Dermoplast®. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=0648c46c-a3db-4b82-971b-50a46098ac7e. Accessed October 13, 2017
Dermoplast®. https://www.drugs.com/mtm/dermoplast.html. Accessed October 13, 2017